Accueil > Gazetin'ny nosy > Praiminisitra Mahafaly Olivier: Hamaky ady amin’ny mpanao gazety koa ?
Praiminisitra Mahafaly Olivier: Hamaky ady amin’ny mpanao gazety koa ?
Isan’ny vaovao nahoraka ary nivoaka an-gazety nanomboka ny alakamisy teo ka hatramin’ny omaly ny fisian’ny volabe mananika ny 12.000 tapitrisa ariary (12 miliara ariary) izay hoe nisy nangalatra tao an-tokantranon’ny Praiminisitra Olivier Solonandrasana Mahafaly teny Ivato. Omaly moa dia nanambara ny heviny teo anoloan’ny mpanao gazety ny Praiminisitra, ka nilaza fa “tsy nisy izany volabe izany very tao amiko”. Notsindriany aza fa “tetika hanakorontanam-panjakana ny fanelezana tsaho sy vaovao tsy marina toa ireny”. Nomarihiny koa fa “fantany ny ao andamosin’ny fampanoratana an’ireny vaovao ireny”. Isan’ny navoitrany aza omaly fa “raha manana izany volabe izany ny tenanay dia tsy hijanona ho praiminisitra fa ho nanao “mpibizina” (???°)” Mbola tsy ampy azy ihany ve, hoy ny mpanara-maso ny sambo lehibe roa efa azony tao anatin’ny fotoana naha-praiminisitra azy sy ny sehatra fanaovana “bizina” hafa any ambadika any, raha izany ?
Omaly takariva ihany dia efa nahoraka teto andrenivohitra fa manan-kevitra ny hitory ny tompon’ireo gazety namoaka iny vaovao momba ny fahaverezam-bola 12.000 tapitrisa tao an-tokantranony iny ity lehiben’ny governemanta ity, satria hoe “mamoaka vaovao tsy marina”. Ny minisitra ny Fifandraisana, Harry Laurent Rahajason (Rolly Mercia) moa, nandritra ny fitsidiham-paritra nataony, herinandro vitsy lasa izay, dia nandrangaranga fa “hampiharina amin’ireo mpanao gazety amin’izay ny lalàna famaizana ho an’ireo tsy mety manitsy ny fihetsiny”. Izany hoe hotoriana eny amin’ny fitsarana amin’izay mba hampiharana ny lalàna famaizana ny mpanao gazety tsy manaiky hilefitra eo anoloan’ny Fitondrana Hvm izany no dikan’izany e !
Ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena moa dia saika nahatsikaritra fa tsy nitsipaka ny fisian’ny fahaverezam-bola tao an-tranony mihitsy ange Ingahy Praiminisitra hatreto fa ny tarehi-marika 12.000 tapitrisa ariary no nolaviny ny fahamarinany e ! Ka inona izany no marina? Ilay 800 tapitrisa ariary navoakanay tamin’ny fiteny Malagasy teto amin’ity La Gazette de la Grande Ile ity ? Lazao àry ny marina raha diso ny tarehi-marika navoakan’ny gazety e !
Fa etsy ankilan’io dia re koa hatramin’iny faran’ny herinandro iny fa “tsy nahafaly ny vadin’ny sasany eny an-dapa ny fahenoana an’io resaka fahaverezam-bola be io”. Tsy faly ny “vadin’ny sasany” satria hoe misy mpitondra manam-bolabe nefa tsy mba nizara taminy ve ? Ka isan’ny fepetra hanilihana an’i Mahafaly Olivier Solonandrasana hiala ao amin’ny lapan’i Mahazoarivo ve izany tsy fankasitrahan’ny vadin’ny sasany an’io tranga io izany ?
Filoha Hery Rajaonarimampianina: Hametra-pialàna afaka roa volana
Inty sy nday: Tena ho voahaja tokoa ve ?
PM Ntsay: Tsy noraharahian’ireo depiote
Governemanta Ntsay: Vaky barara ny zava-miafina teny amin’ny fitsarana
Filankevi-panjakana: Tsy noraisina ny fitorian’i Hanitra Razafimanantsoa
Fier Mada 2018: Hifototra amin’ny asa fampivelarana ny tanora
Riana Andriamandavy: Nanodinkodina vola 190 tapitrisa ariary ?
INTY SY NDAY: Tsy voatery hidina an-dalambe, hono !
FFKM: Ny filohan’ny EEM irery ihany no tonga teny Mahamasina
Mbola Rajaonah: Ho kandidà filoham-pirenena koa ?